Malunga | December 2021
I-Zooey Deschanel kunye 'nePropati yabazalwana' UJonathan Scott Ubudlelwane maxesha, ukuqala xa beqala ukudibana
'Abazalwana bePropathi' 'UJonathan Scott kunye noZooey Deschanel baqala ukuthandana ngoSeptemba 2019. Nantsi yonke into esiyaziyo malunga nolwalamano lwabo ukuza kuthi ga ngoku.
Ibhedi yaseMurphy: Yintoni ekufuneka uyazi ngaphambi kokuba uthenge
Ifanelekile kwindawo yokuhlala encinci okanye kwigumbi leendwendwe eofisini, ibhedi ethobekileyo yaseMurphy yifenitshala entsha eyilelwe ukusonga udonga.
Kutheni le nto iiKnmesi zeKrisimesi zikhona, kwaye kutheni ziyandoyikisa kangaka?
Ngo-2019, kuye kwakho umthamo ophakamileyo wokukhangela 'ii-gnomes zekrisimesi' ngokweGoogle.
Ama-Amazon akhulise eyakho iKrisimesi yoMthi weKrisimesi ingaphantsi kweedola ezili-10
Ukuba sele ucinga ngaphambili kwiKrisimesi kulo nyaka kwaye ufuna ukuphuma konke, cinga ukukhulisa umthi wakho nge-kit yakho ekhulayo yeAmazon.
Ungabubamba njani uBusuku boMdlalo oBonakalayo
Sibeke eyona midlalo ilungileyo yokudlala ubusuku obubonakalayo bemidlalo. Nokuba udlala nayo yonke ifam okanye abahlobo bakho, uya kuyazi ukuba yeyiphi imidlalo oza kuyikhetha.
I-Motion Pillow yi-Smart Pillow eyenzelwe ukukunceda uyeke ukurhona
Umqamelo we-Motion Pillow anti-snore umqamelo unamacandelo amabini: owona mqamelo kunye neBhokisi yeSisombululo, isixhobo esisebenzayo esisebenza ukufumana ingxolo. Xa kufunyanwa irhorho, ibhokisi iya kuthi isayine umqamelo uyibeke ngokuthe chu kwaye ngobunono intloko yakho, ukuze unciphise ukurhona.
'Omnye' weBel-Air yeyona ndawo inkulu eMelika kwaye inexabiso eliphantsi kwi $ 500 yezigidi
'Lowo' ebesele esenziwa kule minyaka isixhenxe idlulileyo ngumvelisi we-movie owayesakuba ngumnxibelelanisi wezindlu, uNile Niami. Ayisiyi kuba 'nguLowo' kuphela owaphula imbali ngexabiso eliphakamileyo, kodwa nobungakanani bayo.
I-Disney World igqiba ukulungiswa kwiNqaba yeCinderella ngexesha lokuVulwa kwakhona
I-Disney World's Kingdom Kingdom igqibile ngokulungiswa kwemibala yeCinderella's Castle kanye ngexesha lokuvulwa kwepaki kwakhona ngoJulayi 11. I-Disney World ivaliwe ukusukela ngoMatshi ngenxa ye-COVID-19.
I-12 I-Easter Egg Hunts Near You to Visit in 2021-I-Easter Egg Hunt kufutshane nam
Ngaba awufuni ukusingatha ukuzingelwa kweqanda kule pasika? Zininzi iindawo zokuzingela amaqanda esidlangalaleni kufutshane nawe. Siqokelele ezinye ezithandwayo ngamaqanda kwilizwe liphela.
I-HGTV Star u-Alison Victoria waseKhaya eKhaya wayeBanjwa nje
Ngo-Novemba ngo-17 nge-12: 40 am, indlu yaseAlison Victoria eBucktown, eChicago yaqhekezwa. Kwalungiswa izinto zokukhanya, indlu yangasese enexabiso eliphezulu nezinto zokwenza imiphezulu yeetafile.
UPriscilla Presley ubamba uMnyhadala eGraceland ngo-2020
Ndwendwela iGraceland ngo-Matshi ngeempelaveki ezinikezelwe kuzo zonke izinto zendlela esemaZantsi, ebanjelwe nguPriscilla Presley.
Ithagethi ithengisa i-3D Puzzle yeHolo eliKhulu ukusuka eHarry Potter
Unokwakha imifanekiso emangalisa, encinci yeHolo elikhulu kunye neNqaba ye-Astronomy kwinqaba yaseHogwarts kunye neepuzzle ze-3D ezivela kwi-Target.
'UChristina kunxweme' ubuye nazo zonke iziqendu ezitsha rhoqo ngoLwesine ebusuku ngentsimbi yesi-9 kwi-HGTV. Ixesha lesibini likhatyiwe ngekhitshi nakwigumbi lokuhlala reno lomcimi-mlilo uTravis, unkosikazi wakhe uJamie, kunye noonyana babo abathathu.
'I-Flip House Flip' isasaza simahla kwiRoku
'Ukubulala iNdlu Flip' ngumboniso wokubuyisela ekhaya othatha amakhaya apho kwenzeka khona ukubulala. Abaqulunqi uMikel Welch noJoelle Uzyel babamba uthotho oluncinci olwaqala ukuboniswa kwiQuibi ngo-Matshi 2020.
Dibana neQela eliNgasemva kweNdlu entle
Yazi wonke umntu onceda ukuzisa amabali akho owathandayo.
UKelly Clarkson ubonakalisa iRanch yakhe yaseMontana
Kwicandelo elikhethekileyo leKelly Clarkson Show, uClarkson wanika ababukeli umbono wobomi bakhe bobufama kwaye wabelana ngasemva kwabo.
UFrank Lloyd Wright weTaliesin Architecture School uguqula isigqibo sokuvala
Isikolo soYilo eTaliesin sisibuyisa isigqibo sayo sokuvala. Ekupheleni kukaJanuwari, isikolo, esasekwa nguFrank Lloyd Wright, sasingenakufikelela kwisivumelwano semali neFrank Lloyd Wright Foundation ukugcina isikolo sisebenza.
Kutheni uBlake Shelton kunye noGwen Stefani bengekatshati okwangoku
Alithandabuzeki elokuba esi sibini, esidibene ngelixa sifota iLizwi kwi-2014 kwaye sidibene ngo-2015, sithandana kabuhlungu.
Uza kulungiswa njani Umonakalo kwi-US Capitol
Ukusuka kwiifestile ezaphukileyo ukuya kwizakhelo ezineminyango engaphaya nangaphaya, umonakalo owenziwe kwi-United States Capitol kuhlaselo lwangoJanuwari 6 lwalubalulekile-kodwa luza kubuyiselwa.
Ungaya ngokugqibeleleyo kwiiStudiyo zeHlabathi ’uHarry Potter Castle Ride
Ukuba kuye kwafuneka urhoxise uhambo lwe-Universal Studios kwaye ubunomdla ngokukhethekileyo malunga nokufumana iWizarding World yeHarry Potter, unokwenza ngaphezulu kokuhamba malunga nokuhamba malunga nayo. Ngeli xesha, ungahamba ngokukhwela kwinqaba yeHogwarts ukusuka kwintuthuzelo yesingqengqelo sakho.
zenziwa njani izithsaba zeHalloween
ikhabhathi ephathekayo enamavili